सिन्धु विकास बैंकको वार्षिक साधारणसभा साउन ६ मा, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । सिन्धु विकास बैंक लिमिटेडले १२ औँ वार्षिक साधारणसभा आह्वान गरेको छ। बैंक सञ्चालक समितिको गत शुक्रबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो साउन ६ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको धुलिखेलस्थित मिराबल रिसोर्ट होटेलमा बिहान १० बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले अन्य उपयुक्त बैंक तथा वित्तीय संस्था आपसमा गाभ्ने,...
एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंकले आफ्नो १६ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। बैंक सञ्चालक समितिमा शुक्रबार (असार १७ गते) बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो साउन ९ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा झापाको बिर्तामोर्डस्थित सिद्धार्थ होटेलमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्तावित लाभांश...
काठमाण्डौ । नेष्डो समृद्ध लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले आफ्नो तेस्रो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। संस्थाको सञ्चालक समितिको बिहीबार बसेको बैठकले यही असार ३१ गते वार्षिक साधारणसभा आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा पर्वतको कुश्मास्थित संस्थाको केन्द्रीय कार्यालयमा दिउँसो १ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले अन्य उपयुक्त एक वा एकभन्दा बढी...
जनरल इन्स्योरेन्सको एजीएम सम्पन्न, ‘जीआईसी नेपाल’ एप सञ्चालनमा
काठमाण्डौ। जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडको चौथो साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको कालिकास्थानस्थित अमृतभोगमा भएको सभामा संचालक समितिका तर्फबाट कम्पनीका अध्यक्ष कुनाल कयालद्वारा पेस भएको आर्थिक पर्ष २०७७/७८ को वार्षिक प्रतिवेदनउपर छलफल गरी पारित भएको छ। त्यस्तै लेखापरीक्षण प्रतिवेदन आर्थिक वर्ष (एनएफआरएस)...
नेपाल इन्स्योरेन्सको एजीएम आज, के–के छन् अजेन्डा ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडको ७३ औँ वार्षिक साधारणसभा आज जेठ ३० गते हुँदैछ। सभा काठमाण्डौको प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्ताव कुल ११.५७८९ प्रतिशत लाभांश अनुमोदन गर्नेछ। जसमा ११ प्रतिशत बोनस सेयर र कर प्रयोजनार्थ ०.५७८९ प्रतिशत नगद...
सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्सको वार्षिक साधारणसभा असार २० मा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको गत जेठ २५ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो असार २० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको धुम्बाराहीस्थित स्मार्ट दरबार ब्यांक्वेटमा बिहान १० बजेबाट हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि...
युनाइटेड इन्स्योरेन्सको एजीएमबाट ६ सञ्चालक निर्वाचित, मर्जरमा जाने
काठमाण्डौ । युनाइटेड इन्स्योरेन्स कम्पनी (नेपाल) लिमिटेडको २८ औँ वार्षिक साधारणसभा आज सम्पन्न भएको छ। काठमाण्डौको शंखमूलस्थित अनमोल ब्यांक्वेटमा भएको सभामा सञ्चालक समितिको वार्षिक प्रतिवेदन, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनसहितको लेखापरीक्षण गरिएको २०७८ साल आषाढ मसान्तसम्मको वासलात, नाफा नोक्सान हिसाब र नगद प्रभाह...
आँखुखोला जलविद्युत कम्पनीले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, लाभांश नबाँड्ने
काठमाण्डौ । आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो १३ औँ र १४ औँ वार्षिक साधारणसभा एकैपटक डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बुधबार बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा आउँदो असार १२ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको नयाँबानेश्वर थापागाउँस्थित अर्पण ब्यांक्वेटमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले सञ्चालक समितिमा...
जनरल इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, यस्ता छन् अजेन्डाहरु
काठमाण्डौ । जनरल इन्स्योरेन्स कम्पनी नेपाल लिमिटेडले आफ्नो चौथो वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही जेठ ३१ गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको डिल्लीबजारस्थित अमृतभोगमा बिहान ११ बजेबाट हुनेछ। सभाले बीमा समितिको स्वीकृति लिई चुक्तापुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात १ः०.३...
नेपाल इन्स्योरेन्सले डाक्यो वार्षिक साधारणसभा, बुक क्लोज कहिले ?
काठमाण्डौ । नेपाल इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो ७३ औँ वार्षिक साधारणसभा डोकेको छ। कम्पनी सञ्चालक समितिको आज वैशाख ६ गते बसेको बैठकले वार्षिक साधारणसभा यही जेठ ३० गते आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। सभा काठमाण्डौको प्रदर्शनीमार्गस्थित नेपाल पर्यटन बोर्डमा बिहान ११ बजेबाट सुरु हुनेछ। सभाले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि प्रस्ताव...